Coagulation Therapy၊ အလိုအလျောက် Esr - Succeeder Technology Inc.
Download My Order လော့ဂ်အင်
ESR နှင့် HCT
SUCCEEDER သည် တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းရှိ Life Science Park တွင်တည်ရှိပြီး 2003 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ SUCCEEDER သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစျေးကွက်အတွက် thrombosis နှင့် hemostasis ရောဂါရှာဖွေရေးထုတ်ကုန်များကို အထူးပြုပါသည်။
China Diagnostic Market တွင် Thrombosis နှင့် Hemostasis ၏ ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအနေဖြင့် SUCCEEDER တွင် R&D၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ အရောင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှု၊ coagulation ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် ဓာတ်ပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ သွေး rheology ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများ၊ ESR နှင့် HCT ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများ၊ platelet aggregation analyzers၊ ISO 13485၊ CE လက်မှတ်နှင့် FDA တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
1. Large-level Lab အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
1. Mid-Large အဆင့်ဓာတ်ခွဲခန်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
3. ပြင်ပဘားကုဒ်နှင့် ပရင်တာ (မပေးထားပါ)၊ LIS ပံ့ပိုးမှု။
1. Viscosity based (Mechanical) Detection စနစ်။
3. အတွင်းပိုင်း USB ပရင်တာ၊ LIS ပံ့ပိုးမှု။
1. ESR နှင့် HCT နှစ်ခုလုံးကို တစ်ပြိုင်နက် ပံ့ပိုးပေးသည်။
2. စမ်းသပ်မှုရာထူး 100၊ ESR စမ်းသပ်မှု 30/60 မိနစ်။
4. LIS ပံ့ပိုးမှု။
5. ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပါသည်။
2. စမ်းသပ်မှုရာထူး 20၊ ESR စမ်းသပ်မှု 30 မိနစ်။
2. Dual methodologies- Cone plate method၊ Capillary method။
3. Dual Sample Plates- သွေးတစ်ခုလုံးနှင့် ပလာစမာကို တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
4. Bionic Manipulator- R...
2. Dual method- Rotational Cone plate method၊ Capillary method။
3. နယူတိုနီယံမဟုတ်သော စံနှုန်းအမှတ်အသားသည် တရုတ်အမျိုးသားအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ရရှိသည်။
4. နယူတန်မဟုတ်သော မူရင်းကွန်ထရို...
1. Small-Medium Level Lab အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
2. Rotational Cone ပန်းကန်ပြားနည်းလမ်း။
4. နယူတန်မဟုတ်သော ထိန်းချုပ်မှုများ၊ စားသုံးနိုင်သောပစ္စည်းများနှင့် အက်ပ်...
1. Small-level Lab အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
4. နယူတိုနီယံမဟုတ်သော ထိန်းချုပ်မှုများ၊ စားသုံးနိုင်သောပစ္စည်းများနှင့် အသုံးချပရိုဂရမ်...
* မြင့်မားသောချန်နယ်၏ညီညွတ်မှုနှင့်အတူ Photoelectric turbidimetry နည်းလမ်း
* အမျိုးမျိုးသောစမ်းသပ်ပစ္စည်းများအတွက်လိုက်ဖက်သောအဝိုင်း cuvettes တွင်သံလိုက်ဘားမွှေနည်း
*5လက်မ LCD ပါ၀င်သော ပရင်တာ။
တကယ်တော့ သွေးပြန်ကြော thrombosis သည် လုံးဝကာကွယ်နိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။လေးနာရီကြာ လှုပ်ရှားမှုမရှိရင် သွေးပြန်ကြောဖြစ်နိုင်ခြေ တိုးလာနိုင်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
သွေးခဲခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
သွေးခဲခြင်း၏ 99% သည် ရောဂါလက္ခဏာမပြပါ။Thrombotic ရောဂါများတွင် arterial thrombosis နှင့် venous thrombosis ပါဝင်သည်။Arterial thrombosis သည် ပို၍ အဖြစ်များသော်လည်း venous thromb...
thrombus သည် သွေးကြောထဲတွင် လှည့်လည်နေသော သရဲတစ္ဆေနှင့်တူသည်။သွေးကြောတစ်ခုပိတ်ဆို့ပြီးသည်နှင့်၊ သွေးပို့ဆောင်မှုစနစ်သည် လေဖြတ်သွားကာ ရလဒ်သည် အသက်ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။နောက်ပြီး...
ကြာရှည်စွာ ခရီးထွက်ခြင်းသည် သွေးပြန်ကြော သွေးကြောပိတ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေကို တိုးစေသည်။
လေ့လာမှုများအရ လေယာဉ်၊ မီးရထား၊ ဘတ်စ်ကား သို့မဟုတ် ကားဖြင့် လေးနာရီထက်ပို၍ ခရီးဆက်နေရသော ခရီးသည်များသည် အကြောင်းရင်းခံကြောင့် သွေးပြန်ကြောပိတ်ဆို့ခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများကြောင်း လေ့လာမှုများက ဖော်ပြသည်။
သွေးခဲစေသော လုပ်ဆောင်မှု၏ ရောဂါရှာဖွေရေး အညွှန်း
သွေးခဲရောဂါရှာဖွေခြင်းကို ဆရာဝန်များက ပုံမှန်သတ်မှတ်ပေးသည်။အချို့သော ကျန်းမာရေးအခြေအနေရှိလူနာများ သို့မဟုတ် သွေးခဲဆန့်ကျင်ဆေးများ သောက်နေသူများသည် bloo စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်သည်...
ကြာရှည်စွာ ခရီးသွားခြင်းသည် အန္တရာယ်ကို တိုးစေသည်...
Addr: 8F၊ Boya CC Bldg 11၊ Life Science Park၊ Beiqing Road၊ Changping ခရိုင်၊ တရုတ်
© မူပိုင်ခွင့် 20102022 All Rights Reserved.